RASMI: Ashley Young oo si rasmi ah ugu biiray Inter Milan… (Lambarkee ayuu u xiran doonaa kooxdiisa cusub?) – Gool FM
(Milan) 17 Jan 2020. Ashley Young ayaa dhameystiray u dhaqaaqitaankiisa kooxda Inter Milan, kabtankii kooxda Manchester United ayaa naadiga reer Talyaani ugu biiray heshiis Lix bilood ah oo uu qiyaar u heysto in lagu kordhiyo sanad kale oo dheeri ah.
Daafacan reer England ee 34 jirka ah ayaa ka tagay Manchester United wuxuuna Inter Milan u saxiixay heshiis ku eg ilaa iyo 30-ka bisha June ee sanadkan 2020.
Ilaa iyo haatan lama shaacinin qiimaha rasmiga ah uu ku wareegay Ashley Young, laakin sida laga soo xiganayo ilo wareedyo Talyaaniga ka imaanaya Inter Milan ayaa siin doonto Man United aduun dhan €1,5 million, si ay u xaqiijiso adeega ciyaaryahankii hore ee Aston Villa.
34 jirkan ayaa yimid kooxda Manchester United sanadkii 2011, waxayna kaga soo qaadatay Aston Villa qiimo u dhexeeya £15-20 million, wuxuu u ciyaaray 261 kulan ee ah dhamaan tartamada, 19 gool ayuu u dhaliyay Red devils, wuxuuna kula guuleystay koobab badan.
Dhinaca kale Ashley Young ayaa kooxdiisa cusub ee Inter Milan u xiran doono maaliyada Lambarka 15-aad.
Macalinka reer Talyaani ee Antonio Conte ayaa la warinayaa inuu rajeynayo in saxiixiisan cusub uu qeyb kaga dhigi doono shaxdiisa kulanka Axada ay Lecce ugu safrayaan horyaalka Talyaaniga.